Mieritreritra eran'izao tontolo izao: Victoria Cliff Resort any Mergui Archipelago, Andaman Sea
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mieritreritra eran'izao tontolo izao: Victoria Cliff Resort any Mergui Archipelago, Andaman Sea
Mpanoratra Keith Lyons
Victoria Cliff Resort, toeram-pisakafoanana snorkeling sy antsitrika vaovao ao amin'ny Archipelago Mergui dia 'mieritreritra eran'izao tontolo izao, mihetsika eo an-toerana' mba hampiroborobo ny fizahan-tany maharitra any Myanmar, araka ny hitan'i Keith Lyons.
Iray amin'ireo toeram-pisakafoanana snorkeling sy antsitrika voalohany ao amin'ny Mipui Archipelago dia miady amin'ny fanamby amin'ny fanomezana traikefa Instagramable ary manatsara ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny nosy lavitra any amin'ny ranomasina Andaman. Victoria Cliff Resort any amin'ny nosy Nyaung Oo Phee, ivelan'ny moron'ny atsimon'i Myanmar sy Thailandy, dia hosokafan'ny minisitry ny fizahan-tany Myanmar amin'ny volana ho avy, saingy efa ho antsasaky ny folo taona vao nahomby ilay toeram-pialan-tsasatra tonga lafatra.
Ny zava-drehetra dia sarotra kokoa noho ny nampoizina, ary ny vidiny dia avo lavitra noho ny any amin'ny tanibe, hoy ny Tale jeneralin'ny Victoria Cliff, Alfred Sui, izay nahazo fampanofana ho an'ny nosy tamin'ny taona 2013. Naharitra roa taona ny fahazoana fankatoavana ny trano lay sy villa. ny governemanta Myanmar. Ny faktiora isam-bolana ho an'ny Internet zanabolana ho an'ny nosy mitokana hanomezana wifi ho an'ny mpiasa sy ny vahiny dia 2,600 dolara amerikana. “Tsy maintsy nanao ny zava-drehetra izahay, anisan'izany ny fahazoana rano hosotroina amin'ny loharano voajanahary, ary ny famokarana herinaratra avy amintsika amin'ny alàlan'ny orinasa mpamokatra masoandro. Tamin'ny naha-voalohany teto amin'ny nosy, ary nitarika, tsy mora izany, fa izahay kosa nanamora ny fanarahan'ny hafa. ”
Ilay nosy rakotry ny ala, nantsoina taloha hoe nosy McKenzie hatramin'ny andron'ny fanjanahan-tany Burma, dia miorina eo amin'ny faritra ivelany amin'ireo nosy 800 izay mandrafitra ny Mergui Archipelago, faritra iray izay tsy dia misy fetra ho an'ny rehetra nandritra ny tapaky ny taonjato lasa. Tany amin'ny faramparan'ny taona 1990 dia nisy sambo mpisitrika vahiny velona nisitrika mivantana niditra tamina faritra saro-pady tamin'ny politika. Ny fizarana nosy vitsivitsy voafantina ho an'ny fampandrosoana dia natomboka tamin'ity folo taona ity, ary ny toeram-pialantsasatra voalohany, Myanmar Andaman Resort, dia tsy mandray mpitsidika intsony, rehefa nifindra tamina mpampiofana mpandeha an-tsambo mitaingina sambo mpitsangatsangana 1500 avy any Singapore, Malezia ary Thailandy. Ny eco-resort voalohany marina, Boulder Island Eco-Resort, dia ao amin'ny vanim-potoana fahatelo izao, ary tao anatin'ny volana vitsivitsy dia nahazo ny vahininy voalohany ireo mpitsangatsangana ambony Wa Ale Resort sy Awei Pila.
Miaraka amin'ireo fasika amoron-dranomasina miloko marevaka, rano mangirana mafana, ary trondro tropikaly marobe ao anatin'izany ny clownfish 'Nemo' malaza, ilay Nyaung Oo Phee rakotra ala mikitroka anaty ala, toa ny nosy paradisa, fa mahita fifandanjana eo amin'ny mpizahatany Ny fitakiana, ny birao mena an'ny birao, ny indostrian'ny jono ary ny fiarovana ny tontolo iainana dia tsy mora. Nilaza i Sui fa ny nosy voafidy voalohany dia nomena antoko hafa misy fifandraisana tsara kokoa amin'ireo mpanapa-kevitra, fomba fanao mahazatra nandritra ny folo taona nitondran'ny fitondrana miaramila an'i Myanmar izay nanaovana 'kapitalisme croni' nefa tsy nisy mangarahara. Taorian'ny fifidianana demokratika Myanmar tamin'ny 2015, ny tsy fisian'ny fahatokisana ny andraikitra sy ny andraikitry ny governemanta rezionaly sy foibe no nanakana ny fizotrany.
Na eo aza ny zava-tsarotra, dia naharitra i Sui, natosiky ny faniriany hamorona orinasan-fizahan-tany maharitra any amin'ny faritra iray izay nijaly tamin'ny indostria fitrandrahana fitrandrahana, fanondranana an-tsokosoko tsena ary ny fivoahan'ny mpiasa mpifindra monina mitady fiainana tsaratsara kokoa any Thailand akaiky. Na dia tsy nahalala ny momba azy aza ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta tany Naypyidaw tamin'ny voalohany, dia nilaza i Sui fa nanova ny sain'ny mpanao politika sy ny mpiasam-panjakana ny fizahana ny tranony.
Ny indostrian'ny jono eo an-toerana, iray amin'ireo mpampiasa lehibe ao amin'ny faritra, saingy meloka noho ny fanararaotana tsy ara-dalàna sy ny fanjonoana tafahoatra, dia nihevitra ihany koa tamin'ny voalohany fa fampitahorana ny fametrahana toeram-pisakafoanana ara-tontolo iainana sy rano ho an'ny mpizahatany. “Tsy mifaninana amin'ny mpanjono izahay, manana fifandraisana amin'ny fiaraha-miasa. Ny momba ny fananganana fifandraisana ary koa ny fanabeazana sy ny fahalalana. ”
Nilaza i Sui tamin'ny fotoana nahatongavany voalohany tany amin'ny nosy, misy porofon'ny fampiasan'ny dinamita amin'ny fanjonoana fipoahana, misy lavaka be ao amin'ny haran-dranomasina. Ny fanaraha-maso tsara kokoa ataon'ny tafika an-dranomasina ao Myanmar dia midika hoe dinamita dia tsy ampiasaina hamonoana sy hahazoana ny fiainana an-dranomasina intsony, fa nilaza kosa izy fa manandrana manabe ireo mpanjono eo an-toerana ny toeram-pivarotana momba ny tsy fanjonoana trondro ambanimbe mba hitazomana ireo tahiry trondro, fa tsy hanimba ny haran-dranomasina Ny toeram-pialan-tsasatra dia nanamboatra fehezan-tsambo ka tsy tokony hotaritaritin'ny sambo ny vatofantsika, ary tsy mahazo manjono ireo mpanjono amin'ireo toerana snorkeling lehibe. “Miantso ny ho avin'izy ireo izahay, amin'izay ampitan'izy ireo ny ho avy. Satria raha trondroina ny ranomasina, raha tapaka ny hazo dia tsy misy ny ho avy. Ho foana daholo izany. ”
Mino izy fa nanampy ny fiarovana ireo tahiry trondro manerana ny nosy ny fisian'ilay toeram-pialofana, ary nametraka haran-dranomasina artifisialy vaovao ny resort mba hamerenana amin'ny laoniny ireo faritra simbain'ny fipoahana. Talohan'ny nandraisan'ny toeram-pialan-tsasatra ny vahininy voalohany, dia nesorina ny fako marobe, ny plastika manerana an'i Azia atsimo atsinanana, ary nariany ny harato fanjonoana matoatoa. Ny morontsiraka Avaratra lehibe ao Nyaung Oo Phee dia diovina intelo isan'andro, miaraka amin'ny fako rehetra niverina tany amin'ny tanibe mba hanodinana sy hanodinana azy.
Raha mpizahatany aziatika amin'izao fotoana izao, indrindra ireo avy any Thailand izay mankafy fidirana maimaim-poana any Myanmar, no mahatratra ny 80% amin'ireo mpivezivezy amin'ny alina na any alina any Nyaung Oo Phee mandritra ny vanim-potoana Oktobra ka hatramin'ny Mey, manantena i Sui fa maro ny Tandrefana hahita ny nosy. Mahatsiaro tena bebe kokoa amin'ny tontolo iainana ny eropeana, hoy izy, toy ny fitandremana sao manimba na fahatsiarovana ny vatohara, ary aleony tavoahangin-drano azo refill toy izay tavoahangy plastika tokana ampiasaina.
Raha ny fialan-tsasatra any Nyaung Oo Phee miaraka amin'ireo tranolay ala sy villa amoron-dranomasina dia manome fidirana mora foana ho an'ny vahiny amin'ny morontsiraka fasika fotônika, metatra vitsivitsy amoron-dranomasina sy fitsangatsanganana an-tsambo kely mankamin'ny tena harena ao amin'ny nosikely, izao tontolo izao ambany izao. Ny fanadihadian'ny Fauna & Flora International tamin'ny taona 2018 dia tombanana manodidina ny 300 karazana haran-dranomasina hita manerana ny nosy, izay miparitaka 400km avy any avaratra ka hatrany atsimo, ary mety misy karazan-trondro 600 mahery ao amin'ny haran-dranomasina monina any amin'ireo haran-dranomasina sy atoll. Ny vondron'olona, ​​snappers, emperora, trondro lolo ary parrotfish dia mahazatra manodidina an'i Nyuang Oo Phee, ary koa ny clownfish 'Nemo' miavaka, ary ny snorkelers sy ny mpitsitrika dia afaka gaga amin'ny latabatra, fantsona, harpa, staghorn, tigerclaw ary haran-dranomasina gorgoniana.
Manakaiky ny olona 300 no miasa ao amin'ny nosy ary ao amin'ny Hotely Victoria Cliff any Kawthaung, ary manantena i Sui fa amin'ny tanibe, fizahan-tany, fizarana ary hetsika miorina amin'ny fiarahamonina no hanomezana antony bebe kokoa ny mpitsidika hijanona eo amin'ny sisin'ny sisintany Myanmar. fa tsy tonga fotsiny amin'ny fitsangatsanganana an-tongotra avy any amin'ny seranan-tsambon'i Ranong any Thailandy, ampitan'ny lohasaha ony. “Ireo nosy ireo dia manolotra hatsarana voajanahary izay tsy hita na aiza na aiza any Azia, ary koa tsy be olona sy tsy dia mandroso loatra. Ny fivoarana rehetra dia mila fehezina mba hitazomana azy ho voajanahary. ”
Maninona ny Israel Travel no tia an'i Jamaika? Fironana fizahan-tany mivoatra
Gulfstream G600 hanao Debut Aostralianina